စျေးနှုန်းပိုးစိုးပက်စက်တန်ပြီး အရသာအရည်အသွေးမီတဲ့ မာလာရှမ်းကောဆိုင် ? – FoodiesNavi
By yin sandi On February 28, 2018 0
အခုရက်ပိုင်းမှာ အဟော့ဆုံးနဲ့အစားအများဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ ? ? မာလာရှမ်းကောကို ? စားနေကျဆိုင်တွေနဲ့မတူဘဲ ? ? စျေးနှုန်းပိုးစိုးပက်စက်တန်တဲ့ ဆိုင်လေးအကြောင်းကို Foodies Navi ကနေပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ? ? တခြားဆိုင်တွေနဲ့လုံးဝမတူတဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဘယ်လောက်ဖိုးပဲစားစား ? ? ဟင်းအနှစ်ဖိုးပေးစရာမလိုဘဲ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ကျသင့်တဲ့ဂရမ်တန်ဖိုးပဲပေးရတာဆိုတော့ လုံးဝစားပျော်တဲ့ဆိုင်လေးပါ။ ? ? ဒီဆိုင်လေးကတော့ တိုက်အမှတ်(၄၆) ၊ စမ်းချောင်းလမ်း ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာတည်ရှိတဲ့ Number One Spicy & BBQ ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ ?
100g ဆီအတွက် ? ? ? အသီးအရွက်ဆိုရင် ၅၀၀ကျပ် ၊ ရေစိမ်ဆိုရင် ၇၀၀ကျပ် ၊ ? ? မှိုနဲ့အသားစုံဆိုရင် ၁၈၀၀ကျပ် ၊ ? ? ပင်လယ်စာဆိုရင် ၂၂၀၀ကျပ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုတောင်စွန်းတန်တာလဲဆိုတာ ? ? ပြောပြနေစရာတောင်မလိုတော့ဘူးနော်။ စျေးသက်သာတယ်ဆိုပြီး အရသာကိုလည်းလျှော့တွက်မထားနဲ့နော်။ ? ? နာမည်ကြီးမာလာရှမ်းကောဆိုင်တွေထက်မနိမ့်တဲ့ အရသာအရည်အသွေးကတော့ ? ? လျှာပေါ်တင်ကြည့်ရုံနဲ့ မလွတ်တမ်းဝါးစားချင်စိတ်တွေ ? ? ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်မှာပါ။ မာလာအနှစ်လေးတွေဟာ အသားလုံးလေးတွေ ၊ ပင်လယ်စာလေးတွေ ၊ အသားအနှံလေးတွေကြားထဲသာမက ခေါက်ဆွဲသားကြားထဲတွေမှာပါ ? ? တိုးဝင်နေသလို အရသာစိမ့်ဝင်မှုကတော့ လုံးဝအမှတ်ပြည့်ပါပဲ။ ❤ ? အစပ်အဟပ်တည့်ပြီး စပ်စပ်ထုံထုံမာလာရှမ်းကောကြိုက်သူတွေအတွက် မဖြစ်မနေသွားစားသင့်တဲ့ ဆိုင်လေးပါနော်။
လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတဲ့အသားတွေကို ? ? အသုံးပြုထားပြီး နူးညံ့အိစက်တဲ့အရသာတွေကို ? ? ခံစားရရှိစေနိုင်မယ့် BBQ မျိုးစုံရရှိနိုင်သလို အစပ်ပြေပဲဖြစ်ဖြစ် အအီပြေပဲဖြစ်ဖြစ် ? ? အချိုတည်းနိုင်ဖို့အတွက် Soft Drink တွေကိုလည်း လိုက်ဖက်ညီစွာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ ⏰ မနက်(၁၁)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source: www.facebook.com/numberonespicy&bbq